शनिबार, फागुन १, २०७७ रामगाेपाल आशुताेष
काठमाडौँ । कवि एवम् आख्यानकार ममता मृदुलको तेस्रो उपन्यास सार्वनजिक भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिद्वय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकूलपति जगमान गुरुङ र वरिष्ठ साहित्यकार पद्मावती सिंहले सो उपन्यासको सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रमुख अतिथि जगमान गुरुङले साहित्यमा लालित्य हुनुपर्ने जिकिर गरे । काव्यशिल्पले मानिसमा जिउने कलाको विकास हुने भन्दै कुनै पनि समाज र राष्ट्रको अध्ययन गर्नेले त्यहाँको साहित्यको अध्ययन गर्ने भएकाले लेखकले समाजका विविध आयाम, इतिहास र वर्तमानको अध्ययन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । त्यस्तै अर्का प्रमुख अतिथि पद्मावती सिंहले कथा वा उपन्यासमा पात्र र तिनको चरित्र चित्रण महत्वपूर्ण हुने भएकाले आफूले ती पात्रको चिन्तन र चरित्रको अध्ययन गर्नु अपरिहार्य भएको धारणा अघिसारिन् । आफ्नो ५० वर्षे लेखनयात्राको अनुभवका आधारमा लेख्दै जाँदा तिखारिने, निखारिने र लेखन परिमार्जित हुँदैजाने भन्दै अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने जरुरी नभएको विचार व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार बेञ्जु शर्माले मृदुलको उपन्यासले मानवीय मनोविज्ञानभित्र छिरेर लेखेकामा खुशी व्यक्त गरे । वरिष्ठ लघुकथाकार श्रीओम रोदनले सिर्जना हतारको यात्रा नभएकाले लेख्दैजाँदा परिष्कृत हुने विचार व्यक्त गरे । उनले भने, "लेख्नु भनेको सिक्नु नै हो ।" अर्का वक्ता समालोचक डा. धनप्रसाद सुवेदीले उपन्यास प्रेम, विवाह र यौन विषयलाई केन्द्र बनाएर लेखिएको बताए । समाज र मानवीय विषयकेन्द्रीत औपन्यासिक पात्र, चरित्र चित्रण र तिनका भोगाइ प्रस्तुतगरेको र कथा वाचनमा कमीकमजोरी रहे पनि भविश्यमा परिमार्जन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बजारमा टिक्ने र बिक्ने उपन्यासको धार र विषय फरक हुने भएकाले अब आउने उपन्यास युग र तत्जन्य यथार्थपरक विषयमा लेख्न सुझाव दिए । अनुसन्धान गरेर लेखे सफल र टिकाउ हुने विश्वास ब्यक्त गरे । अर्का वक्ता श्रष्टा समाजका अध्यक्ष विधान आचार्यले साहित्यमा नियोजन नहुने विचार व्यक्त गरे । उपन्यासमा चित्रित पात्रहरू औपन्यासिक नभएर समसामयिक समाजमा सामाजिक परिस्थिति र परिवेश भोगिरहेका आम नागरिक भएको जिकिर गर्दै मृदुल भविश्यमा अब्बल उपन्यासकार हुने विश्वास पोखे !
कार्यक्रममा उपन्यासका लेखक ममता मृदुलले आफू सिकाइ कै क्रममा नै रहेको बताइन् । समालोचकले भनेजस्तो उपन्यास लेख्न नसक्ने । आफ्नो सीमा र क्षमताका कारण देखेको लेख्ने र जानेको गर्ने बानी भएकाले आफ्नो लेखन भावनाको तहमा हृदयको आवाज भएको जिकिर गरिन् ।
उपन्यास समाज नेपालद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा शंकर भारती र अन्य वक्ताहरूले आफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए ।
शनिबार, फागुन १, २०७७, २१:४२:००
मंगलबार, फागुन ४, २०७७ रामगाेपाल आशुताेष
अञ्जना म्यामले शर्मिलाको श्रीमान् विपिनसँग गरेका च्याटका कुरा पढेपछि। आइमाईको किलकिले हुँदैन भनेर त्यसै भनेर त्यसै भनेका रैनछन् मान्छेले। शर्मिलाले विश्वास गरेर भनेका सप्पै कुरा विपिनलाई सुनाइदिनुहुँदो रहेछ। पुरा पढ्नुहोस्
लमजुङमा हात्तीपाईले विरुद्धको औषधी खुवाउने अभियान सर्यो ३० मिनेट पहिले